यो साल काठमाण्डौमा होली खेल्न नपाइने
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यान दिँदै काठमाण्डौमा होली खेल्न रोक लगाइएको छ । जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले होली खेल्न नपाइने निर्णय गरेको हो । भिडभाड र जमघट..
१३० व्यवसायीलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्देशन
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट गर्ने र नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर-भ्याट तिर्न अटेर गर्ने १३० व्यवसायिक फार्म तथा कम्पनीलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन जानकारी गराएको छ । विभागले बिहीबार..
३१ हजार मानिस अति धनाढ्यको सूचीमा थपिए
एजेन्सी । संसारमा धनी र गरीबबीचको खाडल गहिरिँदै जाँदा थप ३१ हजार मानिस अतिधनाढ्यको सूचीमा परेका छन् । वैश्विक स्टक मार्केटहरू बढिरहँदा अनि घरजग्गाको भाउमा वृद्धि भइरहँदा पहिलेदेखिकै धनीहरूलाई झन्..
कोरोना प्रभावित देशलाई १४ खर्ब दिने विश्व बैंकको घोषणा
काठमाडौं । विश्व बैंकले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि सहयोगको घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकले ६० भन्दा बढी मुलुक कोरोनाबाट प्रभावित भएको भन्दै आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई १२ अर्ब डलर..
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त
काठमाडौं ।युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।खतिवडाले आजै अपरान्ह ४ बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा..
स्वागत र विदाइमा नआउन त्रिभुवन विमानस्थलको अपिल
काठमाडौं । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य अवस्थामा प्रवेश नगर्न सूचना जारी गरेको छ। प्राधिकरणले विमानस्थलले उपलब्ध गराउँदै आएको ‘भिजिटर पास’ बन्द भएको जनाएको छ। सरकारले आइतबार संक्रमण..
काठमाडौं । नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली चढेको गाडी महोत्तरीको बर्दिबासमा दुर्घटना भएको छ । सीपी मैनाली चढेको गाडी अर्को गाडीसँग ठोक्किदा उनी घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार उनको टाउको..
नेपाल ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिलाई दिने बाबुराम र गच्छदार
काठमाडौं । सरकारले करिब ७ वर्षअघि तत्कालिन डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट मोहीका नाममा कायम गरिएको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा नेपाल ट्रष्टकै नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ । बाबुराम..
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत भ्रमणमा पुगेको समयमा राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको प्रदर्शनको क्रममा पाँच जनाको ज्यान गएको छ । नागरिकता संशोधन कानूनको विरोध र समर्थनमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुबिच भएको..
काठमाडौं । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा निर्दोष ठहर भएका छन् । जबरजस्तीकरणी उद्योगको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरालाई सोमवार सफाइ दिएको हो । न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले निर्दोष ठहर गरेसँगै महरा..
अमेरिकी ई–कमर्स कम्पनी अमेजनले भारतमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ । विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिका रुपमा रहेका अमेजनका सीईओ जेफ बेजोसले बुधवार उक्त घोषणा गरेका हुन् । बेजोस ३..
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा तपाईंलाई आकर्षक उपहार परेको सूचना त आएको छैन ? त्यस्तो सूचना वा जानकारीको प्रलोभनमा परेर तपाईँले त्यस्तो सूचना पठाउने व्यक्तिसँग सम्पर्क त गर्नुभएको छैन ? यदि..
एजेन्सी । इरानको तहरानमा दुर्घटनामा भएको युक्रेनी एयरलाइन्सको एक विमानमा रहेका सबै जनाको मृत्यु भएको छ। इरानियन स्टुडेन्ट न्यूज एजेन्सीले विमानमा सवार सबै जनाको मृत्यु भएको जनाएको हो। हाल शव संकलन..
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गानाले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले उपसचिव ढुङ्गाना सहित दुई..
वामदेवले मागे प्रधानमन्त्री, ओलीले गरे ठाडै अस्वीकार, गौतमले भने–राष्ट्रियसभामा जान्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपाका नेता वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । नेकपाको शुक्रबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र..
सैनिक हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण हुँदा ताइवानका प्रधान सेनापति बेपत्ता
एजेन्सी । ताइवानमा सैनिक हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण हुँदा प्रधान सेनापति बेपत्ता भएका छन्। ताइवानी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार वायु सेनाका प्रमुखसमेत रहेका प्रधान सेनापति सेन यी मिङसहित १३ जना चढेको ब्लाक हक..
स्मार्ट लाइसेन्स पनि नक्कली, नक्कली बनाउने ५ जना पक्राउ
काठमाडौं । नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्रको बिगबिगी हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा ल्यायो। तर, यही स्मार्ट लाइसेन्स पनि नक्कली बनाउने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ। प्रहरीले नक्कली स्मार्टधारी..
अमेरिकी दूतावासमा तोडफोड र आगजनी
एजेन्सी । इराकको राजधानी बगदादस्थित अमेरिकी राजदूतावासको कम्पाउन्डभित्रै इराकी प्रदर्शनकारीले आगजनी र तोडफोड गरेका छन् । दूतावासको मुख्य गेट नै तोडफोड गरी उनीहरुले आगजनी गरेका हुन् । जहाँ टियर ग्यास र..
अब घर भाडामा लिनेदिने दुवैले प्रहरीलाई विवरण अनिवार्य दिनैपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा घरभाडामा दिने र लिने दुवैको विवरण प्रहरीलाई दिनुपर्ने भएको छ । केही दिनअघि बसेको गृहको बैठकले घर भाडामा लिएर विभिन्न व्यक्ति तथा समूहद्वारा..
१०० जना सवार विमान दुईतले भवनमा ठोक्किएपछि.........
काठमाडौं । मध्य एसियाली मुलुक काजखास्तानमा एक विमान दुर्घटना हुँदा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार बिहान बेक एअरको विमान चालकदलका सदस्य र यात्री गरी १०० जना बोकेर उडेको..
ब्रिटिस काउन्सिलमाथि कर छलीको आरोप, छानबिन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । कर छलीको आरोपमा ब्रिटिस काउन्सिलमाथि छानबिन हुने भएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ब्रिटिस काउन्सिलमाथि छानबिन गर्न अर्थ र शिक्षा, विज्ञान तथा..
काठमाडौं । चर्चित गायक रामकृष्ण ढकाल र उनकी श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेद भएको छ। बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गायक ढकाल र श्रीमती निलम शाह ढकालबीच सम्बन्धविच्छेद भएको जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले..
अब ट्राफिक नियम तोड्नेबित्तिकै ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा यो कुरा उल्लेख गरिएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर..
एजेन्सी । पाकिस्तानको लाहौर उच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। देश द्रोहको अभियोगमा अदालतले उनलाई मंगलबार मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो। मुशर्रफ अहिले पाकिस्तानमा छैनन् । उनले अहिले..
विश्वकै कान्छी प्रधानमन्त्रीलाई अर्कै देशका मन्त्रीले ‘सेल्स गर्ल’ भनेपछि
एजेन्सी। इस्टोनियाका राष्ट्रपतिले आफ्नो देशका आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीले विश्वकै सबैभन्दा कान्छी ३४ वर्षीया फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीलाई ‘अ सेल्स गर्ल’ भनेकोमा माफी मागेका छन् । राष्ट्रपति केस्टी काल्जुलेडले एक्रे पार्टीका ७० वर्षीय..
२ करोड ५० लाखमा किनियो महाकवि देवकोटाको निवास, अब सङ्ग्रहालय बनाइने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणाअनुसार ‘महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालय’ निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका–३०, मैतीदेवीस्थित कविकुञ्ज र उक्त कविकुञ्जले चर्चेको जग्गा आइतबारदेखि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको छ। विसं २०७५ को..
काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालाकानी सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्या अर्यालसँग छलफल पछि समितिले नेपालको नयाँ..
ठिनी । चिसो बढेसँगै मुस्ताङका खोला तथा तालमा पानी जमेको छ । बुधबारदेखि मौसममा भएको बदलीसँगै बढेको चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । चिसोका कारण उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड..
काठमाडौं । भारतको पासपोर्ट नक्कली प्रयोग हुन नदिन भन्दै भारतको सत्तारुढ पार्टी ९भाजपा०को चुनाव चिन्हसमेत रहेको कमलको फूल समेत राखिने भएको छ । त्यसबारेमा आलोचना समेत भइरहेको बेलामा भारतीय विदेश..
काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी निम्न चापीय प्रणालीको प्रभावले देशैभरीको मौसममा सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने जानकारी दिएको छ । बिहिबार विहान एक सूचना जारी गर्दै महाशाखाले पश्चिमी उच्च पहाडी..
Results 1994: You are at page2of 67